ဖုန်းနံပါတ် Booster ကက်ရှ်သန့်ရှင်း | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » ဖုန်းနံပါတ် Booster ကက်ရှ်သန့်ရှင်း
ဖုန်းနံပါတ် Booster ကက်ရှ်သန့်ရှင်း APK ကို
အခမဲ့-အခမဲ့တက်သိုလှောင်မှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစနစ်က cache ကို, ကျန်နေတဲ့ဖိုင်ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင်တွဲထဲကအသန့်ရှင်းရေးနှင့်ထို့ထက် ပို. ကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်း junk ဖိုင်တွေနဲ့စုပြုံပြွတ်သိပ်ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းအောင်။ဖုန်းနံပါတ် Booster သင့်ရဲ့ Android device ကို performance ကိုချရသောနှေးကွေးအားလုံးပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြဘူးဒီမှာပါ! သင်တို့ရှိသမျှသည် Junk ဖိုင်များကိုရှင်းလင်းဖို့ကူညီပေးသည်။ booster Android device ကို, android ဖုန်း system သို့မဟုတ်တဦးတည်းထိတွေ့၌သင်တို့၏တက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာရှိသမျှဖိုင်တွေပိုကောင်းအောင်ကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်အရှိန်မြှင့်ရန်သင့်ကိုကူညီပေးဖို့ကဒီမှာပါ!
သငျသညျဂိမ်းများကို install သို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံကိုယူဖို့လုံလောက်တဲ့အာကာသရှိသည်မဟုတ်လော
ဒီ feature နှင့်အတူ, သငျသညျလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ Android device ကိုအပေါ်သိုလှောအာကာသကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးအားလုံးမလိုအပ်တဲ့ဒေတာသတ်မှတ်, သိုလှောင်မှုပြန်ဖြစ်ဖို့ cache နဲ့ကျန်နေတဲ့ဖိုင်တွေကိုပယ်ဖျက်, တိုးတက်မှုမြန်နှုန်းနှင့်သင့်ကိရိယာနှင့် SD ကဒ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ apps များအပေါငျးတို့သခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, cache ကို, ကျန်နေတဲ့ဖိုင်များ, အပူချိန်ဖိုင်တွေအပါအဝင် junk detect ။
တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါ, နေရာလွတ်နှင့်ဖုန်းမြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်နှင့်အတူသန့်ရှင်းတဲ့ cache ကို junk ။
သင့်ရဲ့ Android device.It အသိဥာဏ်သင့်ရဲ့ပညာအတတ်မရှိဘဲအလုပ်လုပ်သော apps များရပ်တန့်, နောက်ခံဖြစ်စဉ်များကို clean up နိုင်ပါတယ်အရှိန်မြှင့်, နောက်ခံလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တာဝန်များကိုသတ်ဖြတ်နေဖြင့်မှတ်ဉာဏ်တက်လွှတ်ပေးခြင်း။
CPU ကို Cooler
သင့်ရဲ့ device ကို overheats နှင့်ချအအေးလိုဦးမှာလဲ
ဖုန်း Booster နှင့်အတူ, သင်အလွယ်တကူပြုလုပ် overheat နှင့်သင့်ဘက်ထရီကြာကြာကြာရှည်အောင်ဖြစ်စေတဲ့သော apps များရှာပါနှင့်ရပ်တန့်နိုင်သည်!
ဤသည်က App 100% အခမဲ့သန့်စင်ခြင်းနှင့်အာနိသင်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့ကြိုးစားပါနှင့်အသစ်ကဲ့သို့ပြေးသင့် Android ဖုန်းသို့မဟုတ် tab ကိုရ!
ပိုကောင်းအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက် optimized အသေးစိတ်။
ဖုန်းနံပါတ် Booster ကက်ရှ်သန့်ရှင်း
10.93 ကို MB
Cleaner မစ္စတာ - ...
အစာရှောင်ခြင်း Cleaner - ...